Madaxweyne Xasan oo saxiixay heshiiska dhowrista Xuquuqda Caruurta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo la joogeen mas’uuliyiin ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa maanta saxiixay heshiiska Xuquuqda carruurta.
Munaasabaddan lagu saxiixayay heshiiska caalamiga ee dhowrista xuquuqda carruurta ayaa waxaa goob joog ka ahaa qaar kamid ah siihayayaasha xilalka Wasiirada Soomaaliya, xubno ka tirsan Barlamaanka Soomaaliya, Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Madaxda Hay’adda UNICEF ee Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
Goobta lagu saxiixay heshiiskan oo aheyd Dugsiga Xamar Jajab ayaa waxaa sidoo kale joogay maamulka Dugsiga iyo Boqolaal Carruur ah oo Dugsigaasi wax ka barata, markii Madaxweynaha Jmahuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Dugsiga lagu saxiixay heshiiska caalamigga ah ee dhowrista xuquuqda Carruurta ayaa waxaa Anaashiid Carabi ah ku soo dhoweeyay qaar kamid ah arday Dugsiga Xamar Jajab.
Intaas ka dib Sii-hayaha xilka Wasiirka Haweenka iyo Xuquuqul Insaan Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa ka hadashay marxaladihii uu soo maray heshiiskan.
Madaxa Laanta waxbarashada carruurta Qaramada Midoobay, Stephen Lauweier ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay saxiixa heshiiska Caalamigga ee dhowrista xuquuqda Carruurta oo Soomaaliya ay kamid noqonayso wadamada saxiixay heshiiskan isagoo sidoo kale sheegay in hergelinta heshiiska dowladda Soomaaliya Qaramada Midoobay gacan ka siin doonto.
Sidoo kale Wakiil gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Danjire Nickolas Kay oo hadal dheer ka jeediyay goobta ayaa sheegay in Soomaaliya ka soo kabanayso dhibaatooyinka soo maray isla markaana mustaqbalka Dalka uu ifayo
Madaxwyenaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo qalinka ku doogay heshiiskan ayaa ugu horeyn waxaa uu ka hadlay ahmiyadda heshiiskan uu u leeyahay carruurta Soomaaliyeed.
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya oo hadalkiisa dhiiradda ku saarayay sida da’yarta ay muhiim ugu tahay dib u dhiska dalka ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay hirgelinta heshiiskan waxaana uu balan qaaday in carruurta ay heli doonaan xuquu siman.
13-kii bishii December ee sanadkii tagay 2014-ka ayaa Barlamaanka Soomaaliya uu meel mariyay heshiiskan caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda carruurta waxaana Soomaaliya ay kamid tahay in ka badan 190 dal oo aqoonsan heshiiskan.